एउटा हात्तिको यो कथा ! तपाइँको जीवन बदलिन्छ। अहिल्यै पढ्नुहोस , प्रेरणा लिनुहोस् – Halkhabar kura
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार २२:४४
एउटा हात्तिको यो कथा ! तपाइँको जीवन बदलिन्छ। अहिल्यै पढ्नुहोस , प्रेरणा लिनुहोस्
शुक्रबार १४ जेठ , काठमाण्डौ
आज शुक्रबार। दिनको सुरुवात गर्नुहोस् यो ज्ञान र सकारात्मक उर्जा दिने कथाबाट।
(लेखक : संजिव न्यौपाने)
कुनै एक ठाउँमा हात्तीका बथानहरु थुनिएका थिए। एकजना मानिस त्यहींबाट हिड्दै थियो। उसले देख्यो ,
हात्तीहरुलाई एउटा सानो डोरीले बाँधिएको थियो। उ अचम्ममा पर्यो। त्यति ठुलो हात्ती तर सानो डोरीले कसरि अड्यो होला ?
थोरैमात्र पनि प्रयत्न गर्ने हो भने ति हात्तीहरु मज्जाले त्यो डोरी छिनाएर भाग्न सक्थे तर किन भागेनन् ? यहि जिज्ञासाले उसले त्यो हात्तिको रेखदेख गर्ने मान्छेसँग सोध्यो ,
” दाई , यी हात्तीहरु देखेर म अचम्मित भएँ। यी हात्तीहरुलाई सानो डोरीले बाँधिएको छ। इनिहरु यो डोरी छिनाएर मज्जाले भाग्न सक्ने देखिन्छ तर पनि यो हात्तीहरु भागेका छैनन् र सानो डोरीमा अल्झिएर बसेका छन्। इनिहरुले किन भाग्ने प्रयत्न गर्दैनन् ??”
त्यो हात्तिको रेखदेख गर्ने व्यक्तिले जवाफ दिए , “हेर्नुहोस इनिहरु सानो छँदा इनिहरुकै वजनलाई धान्ने खालको मोटो डोरीले हामीले इनिहरुलाई बाध्ने गर्छौं। त्यतिबेला इनिहरुले भाग्ने खुब प्रयत्न गर्छन तर सक्दैनन् अनि जति जति इनिहरुको उमेर बढ्दै जान्छ, त्यतिबेला उनीहरुले बिर्सीइसकेका हुन्छन कि उनीहरुको वजन बढिसकेको छ र अब त्यो डोरीलाई उनीहरुले छिनाउन सक्छन। उनीहरुले आफ्नो शक्तिको बिश्वास नै गर्दैनन् अनि इनिहरुले त्यसैले भाग्ने कुनै प्रयत्न नै गर्दैनन्। ”
हात्तीहरु त्यहाँबाट नाभाग्नुको कारण एउटै थियो कि , उनीहरुले समयको साथ आफ्नो बढेको बल र सामर्थ्यलाई बिस्वास गर्न सकेनन्।
ज्ञान : सधैं हाम्रा दिनहरु एकनाशका हुँदैनन्। समयसंगै हामीले आफ्नो सामर्थ्य , ज्ञान र विवेक पनि बढाउदै जानुपर्छ। अनि ,
बल मात्र बढ्यो तर विवेक पुगेन भने त्यो बलको पनि कुनै अर्थ नै हुँदैन। जस्तो यहाँ हात्तीलाई हेर्नुहोस। समय अनुसार उनीहरुको बल त बढ्यो तर विवेक पुगेन।अनि,
हात्तीलाई जसरि नै तपाइँ हामीलाई पनि समाजले पछाडि तान्न खोज्छन्। तर ,
तपाइँ हामीमा पनि हात्तिको जत्तिकै बल छ र त्यो पछाडि तान्न खोज्ने समाज भनेको त्यो हात्तीलाई बाँधेको डोरी जस्तो हो जसलाई तपाइँ सजिलै तोड्न सक्नुहुन्छ। हात्तीहरुले बिश्वास गरेनन् आफ्नो सामर्थ्यमा तर,तपाइँ अब बिश्वास गर्नुहोस। आज नै ,
तोडिदिनुहोस त्यो डोरी र बढ्नुहोस अघि। तपाइँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन।
Previous आज शिव–पार्वतीको विवाह महोत्सव अर्थात् अक्षय तृतीया जसको बैज्ञानिक महत्व यस्तो छ
Next एक गरिब वृद्ध बुवा र छोरीको कथा तपाइँको जीवन बदल्न काफी छ। पढ्नुहोस सकारात्मक उर्जा लिनुहोस्